Liiska dhibanayaasha ciyaartoyda guryahooda la xado oo sii kordhaya iyo habka oo isku… – Hagaag.com
Liiska dhibanayaasha ciyaartoyda guryahooda la xado oo sii kordhaya iyo habka oo isku…
Posted on 2 Maarso 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Liiska dhibanayaasha ciyaartoyda ayaa sii badanaya laakiin habka ayaa ah mid isku mid ah: waa suggida laacibka inuu ka baxo gurigiisa si uu uga qeyb galo kulan ciyaareed oo muhim ah kadibna la weeraro guriga lana xado waxa yaalla ee qaaliga ah.
Ugu dambeyntii liiska ayaa ku biiray ciyaartoyda guryahooda la dhacay Karim Benzema oo la xaday gurigiisa maalintii Arbacada, asaga oo ku mashquulsanaa ciyaartii Real Madrid iyo Barcelona ee qeybtii hore ee is araga semi finalka koobka boqorka.
Waxa ay u aheyd habeen adag gooldhaliyaha reer France, kaasoo ka caawini waayey kooxdiisa inuu ka badbaadiyo guuldarada ku habsatay oo looga badiyey seddax gool oo nadii ah.
Labo todobaad ka hor, isla dhacdadan ayaa soo gaartay Kevin Prince Boateng, oo ku biiray Barcelona bishii Janaayo. Boateng ayaa gurigiisa la xaday asaga oo kooxdiisa la ciyaareysay kooxda Real Valladolid ee horyaalka Spain.
Kevin Prince Boateng ma aheyn kan kaliya ee dhibanaha u ah ciyaartoyda Barcelona,
Isla arrintaa oo kale ayaa ku dhacay saaxiibkiisa, Jordi Alba, bishii November. oo u joogay magaalada Milano ciyaar kooxdiisa dhex mareysay Inter Milan ee tartanka Champions League, markii ay galeen tuugada gurigiisa oo ka xaday waxyaabo qiimo leh.